Vanachiremba Vanofamba: Ndeapi maBrands uye Zvimiro zviripo
Vanhu vane kufamba matambudziko atova nehupenyu hwakaoma. Kana kufamba uchienda kubhokisi retsamba ibasa rakakura, kuve ne Walker ingave rubatsiro rwakakura. Pane zvakawanda zvingasarudzwa zvekurapa vanofamba kuwanikwa, saka kutsvaga imwe inoenderana nezvido zvako kunofanirwa kuve nyore nyore. Kuziva mhando, mamodheru uye maficha zvinogona kubatsira kana uchifanirwa kuita iyo yekupedzisira sarudzo.
Iri gwaro richakubatsira iwe kucheka kuburikidza nekuvhiringidzika kuitira kuti iwe ugone kusarudza iyo yakakwana Walker kune iwe kana wako waunoda uye muvabatsire kuti vatorezve kumwe kurasika kwavo kurusununguko.
Rudzii rwe Walker Ndinoda here?
Chinhu chekutanga chaunofanira kufunga nezvacho rudzi rwe Walker unoda. Iwe unofarira rollators (iyo vanofamba dzine mavhiri) kana zvakajairwa vanofamba (isina mavhiri)? Kutenderera vanofamba ayo akapetwa anouya ari matatu kana mana mavhiri akasiyana uye sarudzo yako inoenderana nekugadzikana kwako.
Mavhiri matatu vanofamba ndeaavo vanongoda rubatsiro diki, asi iwo mana mavhiri akasimba uye anogona kutsigira huremu hwakawanda. Kunyangwe iyo isingaremi 4 mavhiri vanofamba inogona kutsigira kusvika pamapaundi mazana matatu.
Hugo Walker: Ndini here NEED Izvo?
Iyo isingaremi vanofamba Isarudzo yakakurumbira yanhasi Walker vashandisi. Sarudzo yekuve ne Walker iyo iri nyore kutakura uye kushandisa iri mukuda kukuru. Nekupa kukuru kubva kune avo vatengi mabhureki saKarman Healthcare vaburitsa huremu hwakareruka vanofamba izvo zvakachengeteka uye zvine zvakawanda zvekuwedzera-pane maficha. Ngatinyatsoongororai mamwe emamodheru.
Iyo modhi R-4800 inotakurika Walker ine mavhiri, chigaro uye kumashure ndeye 4 vhiri rollator yakagadzirirwa kutakura kusvika kuma300 lbs. Hapana zvishandiso zvinodiwa kugungano uye zviri nyore kupeta uye zvinouya nemavhiri makuru kwazvo. Iko kune nylon tswanda pasi pechigaro iyo inopa hukuru hwekuchengetedza.
Vaviri mune Imwe rollator
Imwe modhi, R-4602-T ndeye 2-in-1 yekurapa Walker zvinoita senge rollator sitaira Walker uye a transport chair. Zvinosiyana pamutengo kubva pa $ 270 kusvika pa $ 635 zvinoenderana nekwaunotenga kubva. Zvimwe zvinhu zvikuru zvinosanganisira dhizaini yakasarudzika iyo inokutendera kuti uchinje nekukurumidza kubva Walker to transport chair uye zvinopesana nhanho imwe chete yakapusa.
Inopeta kusvika kune compact size yekuchengetera nyore, inogona kutakura inosvika ku250 lb., inogadziriswa pakukwirira, haidi chero maturusi egungano, yakanaka saizi dengu rekuchengetedza, rinobviswa tsoka zororo uye makuru mavhiri anoita kuti zvive nyore kufamba pamusoro peyakaomarara kana nzvimbo isina kuenzana.
Mamwe Mhando dzeRolling vanofamba
Chimwe chakakurumbira chiratidzo chinonzi Nova icho chine akawanda mamodheru uye maficha. Iwo anozivikanwa zvikuru Nova mamodheru ane Walker vashandisi ndiyo Mini Mack 4214 uye Cruiser Deluxe 420. Zvimiro zvinouya zvakajairika nemhando idzi zvinosanganisira chigaro chakakamuka, zvigadziriso zvinogadziriswa, mavhiri makuru, tswanda yekuchengetedza, mabhureki ekuchengetedza pamwe nezvimwe zvinoshandiswa nyore kushandisa.
Pakusarudza zvekurapa Walker brand yezvinangwa zvako, uchafanirwa kuita zvishoma zvekuchikoro kuti uwane yako yakakwana Walker. Verenga wongororo dzevashandisi pamwe neruzivo rwemuiti kuti iwe ugone kuita sarudzo ine ruzivo.